what is internet, how to use internet, about ip address, learn about internet, about computer, few information about computer, computer knowledge, waht is computer, child education in Nepal, educate your children online,, An online link of nepali portals, nepali food recipe, how to prepare momo, how to prepare dal bhat, how prepare nepali food, newari food, list of nepali food recipe, useful links of nepal, map of nepal, airlines list, nepali calendar, slc result, STD ISD codes, insurance companies, EDV Result, nepal banks, univercities, finance, remittance, hotels, travel , trekking and many more
All about Internet :
1 इन्टरनेट के हो
2 इन्टरनेट का उपयोगिताहरु
3 इन्टरनेट को इतिहास
4 वेब ब्राउसर के हो
5 यच टिक यम यल के हो
6 www के हो
7 IP address के हो (चित्र सहित)
The Internet isaglobal system of interconnected computer networks that use the standard Internet protocol suite (often called TCP/IP, although not all protocols use TCP) to serve billions of users worldwide. It isanetwork of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government networks, of local to global scope, that are linked byabroad array of electronic, wireless and optical networking technologies. The Internet carries an extensive range of information resources and services, such as the inter-linked hypertext documents of the World Wide Web (WWW) and the infrastructure to support email. (wikipedia).
ईन्टरनेट भनेको संसारभरीका कम्प्युटरहरू, कम्प्युटर उपकरणहरू र धेरै सन्जालहरूको एउटा ठुलो सन्जाल हो । जुन सन्जाल (network) ले एक अर्को कम्प्युटरसँग एकै किसिमका (साझा) सफ्ट्वयरको प्रयोगद्वारा सम्बध कायम गर्दछ । टेलीफोन तार र उपग्रह सम्बन्ध को माध्यमबाट, इंटरनेट उपयोगकर्ताहरुले बिभिन्न किसिमको जानकारी सार्वजनिक गर्न वा अदान प्रदान गर्न सक्छन ।
इन्टरनेट का उपयोगिताहरु
Advantage and usage of internet
ईन्टरनेटले साधारणतया उपयोगकर्ताहरुलाई निम्न काम गर्ने सुबिधा दिन्छ:
सजिलै ब्यक्तिगत कम्प्युटर र स्थानीय फोन नंबर को माध्यम बाट ईन्टरनेटमा जोडिने,
ब्यापार, साथीहरू तथा आफन्त, सहयोगिहरूसँग ईमेल, सिधै संपर्क वा अरु माध्यमबाट संपर्क कायम गर्ने,
सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरि जानकारी, तथा समाचार्-सुचना प्रसरण गर्ने,
ईन्टरनेटको मद्द्तले प्रतक्ष्य प्रसरण गरि अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने,
बिभिन्न मल्टीमीडिया जस्तो ध्वनि, फोटो, चित्र र चलचित्र को उपयोग गरि संचार कायम गर्ने,
बिभिन्न अरु दृष्टिकोण र तरिकाबाट उपयोग गर्ने,
समान खरिद बिक्री गर्ने,
अन्लाईन काम गर्ने (प्रतक्ष्य अर्को कम्प्युटरसँग संपर्क गरि उत्तिनै खेरी सुचना आदान प्रदान गर्ने)
इन्टरनेट को इतिहास
ईन्टरनेट बन्ने आधार त कम्प्युटर बन्ने बित्तिकै ५० को दसकमा नै शुरु भयो तर ईन्टरनेट को प्रादुर्भव चाँही ६० को दसक तीर भएको हो । अमेरिकन मिलिटरीले आफ्नो सबै कम्प्युटरहरूको सन्जाल बनाउने क्रममा ARPAnet भन्ने पहिलो नेट्वोर्क बनायो । त्यस्को २ दसक भित्र ईन्टरनेट को प्रयोग अंमेरिकी बैज्ञानिक अनुसन्धान, ठुला शैक्षिक प्रतिस्ठान र अमेरिकन सरकारका आन्तरिक कार्यमा प्रयोग हुन थाले । इंटरनेटले १९९२ मा कोल्टे फेर्यो जब अमेरिकी सरकारले नेटवर्कलाई सबजनिक गर्ने शुरूवात गर्‍यो । संस्था र आम जनतालाई इंटरनेट उपयोगको स्विक्रिती प्रधान हुने बित्तिकै इंटरनेटले ब्यापारिक रुप लियो र आश्चर्यजनक विस्तार को शुरुआत भयो । अहिले ईन्टरनेट सबै तीर छ । सामाजिक सन्जाल (social networking - facebook, twitter ) को चरम बिकास ईन्टरनेट कै देन हो ।
सबै भन्दा अचम्म को कुरा के छ भने, ईन्टरनेट एउटा खुल्ला सन्जाल हो । यसलाई चलाउने कुनै केन्द्रिय संस्था छैन् । यो कसैको अधिनमा छैन् । केबल २ कुरा Internet Protocol address space र Domain Name system मात्र प्रतक्ष रुपमा ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)ले ब्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । ईन्टरनेट जगतमा तपाईं आफूले जाने जस्तो किसिमको नयाँ प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ, केबल ती कुरा हरू तपाईं को कम्प्युटरमा चल्ने वेब ब्राउजर (web browser ) मा चल्ने हुनु पर्‍यो ।
वेब ब्राउसर के हो
Web Browser भनेको कम्प्युटरमा विश्व सन्जाल ( world wide web )मा रहेका सामाग्रीहरू खोल्न, हेर्न, प्रयोग गर्न को लागि उपयोग गरिने सफ्ट्वेयर हो । अहीलेलाई सजिलो गरि भन्दा वेबसाईट हेर्न वा ईन्टरनेट खोल्दा प्रयोग गरिने फ्रेम हो, ईन्टरनेट एक्स्प्लोरर (Internet Explorer), फायरफ़क्ष (Firefox), गूगल क्रोम (Google Chrome), आदि यसका उदाहरण हुन ।
यच टिक यम यल के हो
हाम्रो कम्प्युटरको ब्रौसरले बुझ्ने भाषालाई HTML ( HyperText Markup Language ) भनिन्छ । यो भाषा वा अरु नयाँ यस्तै प्रकारका कम्प्युटर भाषाहरूले हामी भन्दा हजारौं माइल्स टाढा रहेका सर्भर (server ) बाट हाम्रो समक्ष्य दृष्‍य लिएर आउछ । सर्भर भन्लाने ती सामाग्रीहरू रहेको कम्प्युटर उपकरण हो, जहाँबाट हामिले हाम्रो कम्प्युटरमा ईन्टरनेटको मद्द्तबाट सामाग्री हेर्ने गर्छौ । (सन्सारमा लाखौं सर्भर छन्, तपाईंको घरको कम्प्युटरलाई पनि सर्भर बनाउन सकिन्छ र सारा संसार पुग्न सकिन्छ ईन्टरनेटको मद्द्त बाट । )
यहाँ बुझ्न को लागि के आवश्यक छ भने ईन्टरनेटमा देखिने सबै कुराका प्रोग्रामहरू तपाईंका कम्प्युटरमा मात्र चल्दैनन । केही सर्भरमा चल्छन भने केही प्रोग्राम तपाईंको कम्प्युटरमा चल्छन । सर्भरमा चलेर आउने वा तपाईंको कम्प्युटरमा चल्ने दुबै खाले प्रोग्रामलाई तपाईंको स्क्रीनमा देखाउने काम भने त्यहि HTML ले गर्दछ ।
अहिले हाम्रो कम्प्युटरमा हामिले लेखेको कुरा तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा हेरिरहनु भएको छ । तपाईं आफ्नो साथी आफन्त सँग फेसबूक, याहू, स्कैप बाट प्रतक्ष्य कुरा गर्नु हुन्छ । यो सबै सर्भरको मध्यमबाट हुन्छ । (धेरै प्राबिधिक पक्षलाई हामि समेटेका छैनौ यहाँ । ) हाम्रा सबै सामाग्रीहरू हामिले एउटा कुनै कम्प्युटरमा राखेका छौ , तपाईंलाई www.weallnepali.com ले हाम्रो सर्भरसँग संपर्क गर्न मद्द्त गर्छ अनि तपाईंले यी सामाग्रीहरू देख्नु हुन्छ । HTML भन्ने कम्प्युटर भाषाले तपाईंको कम्प्युटरमा ती सामाग्रीहरुलाई देखाउने काम गर्छ ।
www के हो
WWW शब्द को पुरा रुप वर्ल्ड वाइड वेब हो।
वेबसाईट को ठेगाना लाई url अर्थात Uniform Resource Locator भनि सम्बोधन गरिन्छ । ईमेल को address के हो भनेर सोधे जस्तै कसैलाई कुनै वेबसाईट को नाम सोध्नलाई त्यो वेबसाईट को url (यु आर यल ) के हो भनेर सोध्ने चलन पाईन्छ । www वर्ल्ड वाइड वेब भनेको तेही संसार भर का कम्प्युटरहरुबाट इंटरनेट को मध्यमले ति सम्पूर्ण दस्ताबेज र सामग्रीहरु हेर्ने एउटा प्रणाली हो .
www नै मात्र ईन्टरनेट होईन, ईन्टरनेटका धेरै प्रणाली र उपयोगिताहरू छन् । www ईन्टरनेटको एउटा प्रणाली वा उपयोग हो, जस्ले वेबसाईटलाई हामी समक्ष्य प्रस्तुत गर्द्छ ।
IP address के हो (चित्र सहित)
हामिले टाईप गर्ने वेबसाईटका url ( http://www.google.com ) मानबलाई पढ्नको लागि लेखिएको भाषा हो बस्तबमा तपाईंको कम्प्युटरबाट जाने IP address हो । IP को पुरा रूप Internet Protocol हो , हामिले टाईप गरेको url लाई हाम्रो कम्प्युटरले IP address को रूपमा लिन्छ । IP address भनेको हाम्रो कम्प्युटर को address हो । यो कम्प्युटरको ईन्टरनेटमा ठेगाना हो । यहि ठेगाना को मद्द्तले तपाईंको कम्प्युटरमा सन्देस आउने र कम्प्युटरबाट सन्देश जाने गर्दछ ।
IP ठेगाना यस्तो देखिन्छ http ://74.125.225.18
Figure: IP Address
यो अङ्क जस्तो देखिने address हो । जुन हामीले हेर्दा http ://www .google .com देख्छौं । माथि को कुरा राम्ररी बुझ्नलाई त्यो पुरै अङ्क आफ्नो ब्राउसर को ठेगाना लेख्ने ठाउमा type गर्नुस त , google को पेज खुल्छ । तर त्यस्तो अंकहरू मानबलाई पढ्न, कण्ठ गर्न गार्हो र असजिलो हुँने भएर कम्प्युटरले मान्छेले पढ्न योग्य बनाउदा www.google.com देखिन्छ । वास्तवमा कम्प्युटरले 74.125.225.18 नै देखिरखेको हुन्छ ।
सबै ईन्टरनेटमा जोडीएका कम्प्युटर को आफ्ना आफ्नै ब्यक्तिगत IP address हुन्छ । तपाईंको कम्प्युटरको पनि छ । हुलाकीले घरको ठेगानामा चिट्ठी लेराउन ठेगाना हेरे जस्तै ईन्टरनेट ले यहि address हेर्छ ।